Igodo iji lelee maka mmelite gam akporo anaghị arụ ọrụ | Gam akporosis
Lelee maka mmelite bọtịnụ agbajiri na ụfọdụ gam akporo
Eder Ferreño | | Nche, Nkuzi
na Gam akporo igwe nwere ụzọ dị mfe iji mara ma ọ bụrụ na melite dị ekele maka nlele maka mmelite bọtịnụ. N'ụzọ dị otú a, mgbe anyị pịa bọtịnụ ahụ, anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na enwere ihe dị ma ọ bụ na ọ nweghị. Ya mere, anyị na-ebudata ma wụnye ya na ngwaọrụ anyị. Ọ bụ ezie na, ọ dị ka eziokwu dịtụ iche, dị ka ọ dị enwere ọdịda na sistemụ ahụ.
Elliott Hughes bụ onye injinia Google nke kwuru na bọtịnụ mmelite ahụ adaala na ugbu a ọ naghị arụ ọrụ. Otu ihe ahụ mere ọtụtụ ọnwa gara aga. Ozokwa, odi ka anyi aghaghi ichere ka azịza bia.
En Septemba enwere ahụhụ na bọtịnụ mmelite, nke e mechara nwee ihu ọma. Ma nanị ọnwa atọ ka e mesịrị, otu ọnọdụ ahụ kwughachiri. Na mgbakwunye, ọ dị ka n'okwu a anyị ga-echere ruo 2018 maka ihe ngwọta ịbata.
O doro anya na, dịka onye engineer Google kwuru, na mmelite na usoro mmelite Google agbanwere mgbanwe na Google Play. Mgbanwe ndị a mere ka nhọrọ maka ibudata nsụgharị OTA ka ọ ghara ịrụ ọrụ. Ya mere enwere ike ọrụ na-adịghị natara mmelite n’oge a. Ya bụrụ otú ahụ, ihe kpatara nsogbu a bụ nke a.
Ugbu a amabeghị oge nsogbu a na-arụ ọrụ. Amaghi kwa oge o ga-ewe iji nye nsogbu ya. Ekwuru na ọ ga-abata n’afọ 2018, n’agbanyeghi na ekpuchighị ọtụtụ ihe gbasara ya. N'ihi ya, ọ bụ kwesiri ngosi nke maka android ọrụ.
Nke a bụ ahụhụ dị oke njọ, ọ bụ ezie na ozi ọma ahụ bụ ya ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-eji sistemụ OTA nke ha. Nke ahụ pụtara na ha anaghị adabere na Google. Yabụ na ọ nwere ike ịbụ na ọdịda ahụ emetụtaghị gị ma ịnwere ike ịnweta mmelite ahụ nke ọma. N'ihi na ndị nwe ya Pixel na Nexus Enweghị ihe ọ bụla ichegbu onwe gị, ebe ọ bụ na etinyela ahụhụ ahụ na ngwaọrụ ndị a.
Ma ugbu a ndị ọzọ niile mobiles na-adabere na Google update usoro na-emetụta nsogbu a. Ndi afo edi kiet ke otu oro?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Lelee maka mmelite bọtịnụ agbajiri na ụfọdụ gam akporo
Ebumnuche 7 iji zụta LEAGOO 5Tc ọhụrụ